Kulan Aqoon kororsi ah oo Muqdisho loogu soo xiray senatarada aqalka sare – Kalfadhi
Kulan Aqoon kororsi ah oo Muqdisho loogu soo xiray senatarada aqalka sare
Aqoon kororsi ku saabsanaa maamulka iyo agaasinka baarlamaanka ayaa Muqdisho loogu soo xiray senataro ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
La dagaalanka musuq maasuqa iyo dhismaha guddiga la dagaalanka musuqa ayaa sido kale looga hadlay aqoon kororsiga.
Hey’adda SSG iyo golaha aqalka sare ayaa iska kaashaday qaban qaabada aqoon isweydaarsiga oo socday laba cisho.
Senatar Samsam Ibraahim Cali oo ah Guddoomiyaha Guddiga Cadaallada, haweenka iyo xuquuqul insaanka aqalka sare oo kamid aheyd senataradii ka faaiideystay aqoon kororsigaas ayaa Kalfadhi u sheegtay inuu ahaa aqoon kororsigii ugu horreeyay ee noociisa ah ee loo qabto senatarada aqalka sare.
Guddiga joogtada golaha shacabka oo ka hadlay qorshaha baarlamaanka